Fandikan-dalana tamin’ny fifidianana :: Hitory an’ireo mpangala-bato ny CENI • AoRaha
Fandikan-dalana tamin’ny fifidianana Hitory an’ireo mpangala-bato ny CENI
Fanabontsinana isa an-jatony no hita nandritra ireo fampitahana ny sary nalaina dika tamin’ny fita­nana an-tsoratra na « scannée » sy fitanana an-tsoratra tena izy, nataon’ny Vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (Ceni) amin’izao foto­ana izao. Kandidà solombavambahoaka telonjato mahery no nitondra porofo teny amin’ny foiben’ny Ceni sady niaraka nanamarina ny fanisam-bato.
Maro ireo fangalaram-bato tratra sy voamarina. Milaza ny hampiakatra ny raharaha eny amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) ny Ceni. “Tsy maintsy han­drai­sana fepetra ireo tranga ireo”, hoy ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry. Ankoatra izay, mbola hitohy hatramin’ ny alakamisy 13 jona ny fampitahana an’ireo fitanana an-tsoratra ireo ary holazaina amin’ny fomba ofisialy amin’ny 15 jona ny vokatra feno vonjimaika. Tsy ny famoahana ny anaran’izay lany ho solombavambahoaka no hataon’ny Ceni fa ny famoahana ny vato azon’ireo kandida tsirairay. Dimy ambin’ ny folo andro aorian’io kosa no hamoaka ny vokatra farany ny HCC, izay hany manam-pahefana amin’ny fanapahana ny voka-pifidianana ofisialy ho an’ireo lany tamin’iny fifidianana solombavambahoaka iny.
Mankahery ny CENI @ fananana fahavononana sy fahasahiana @ famoahana ny mangarahara ka hitory ireo candidat Solombavam-bahoaka tsy mahazaka RESY ka nanao fahadisoana goavana t@ fangalaram-bato mba hampazava @ vahoaka fa madio ny asan’ny CENI sy ny HCC fa ny mpanao politika matahotra fitsaram-bahoaka no miezaka manaratsy endrika ireo andrimpanjakana mikirakira ny fifidianana
Fitsarana voka-pifidianana :: Torohan’ny HCC ireo kandidà mikasa hanao tsindry ankolaka
Fanagiazana harena tsy ara-dalàna :: Andrasana ato ho ato ny hitsivolana fampiharana an’ilay lalàna